Fannaaniinta 'Game of Thrones' ayaa ka hadhay xusuusta sawirada Spotify - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo 'Game of Thrones' ayaa marti geliyay farriintan of Spotify - liiska BGR
Fannaaniinta 'Game of Thrones' ayaa ka hadhay sheekooyinka xusuusta ah - Spotify - BGR
Haddii aad rabto inaad ogaato sida Game of Thrones dhamaato, labada xiddigood ee taxanahan waxay halkan u joogaan inay sameeyaan waxyaabo cad. Pun wuxuu rabay.
David Benioff iyo DB Weiss waxay aasaaseen Spotify playlist - Ciyaarta of Thrones: dhamaadka yimaado taas oo waxaad halkan ka heli kartaa iyo hoos fiiri - taas oo ay ka mid yihiin isku dhafan oo isku dhafan. Waxay ku bilaabataa, tusaale ahaan, hurdiga hadda ee dabka laga bilaabo Rage Against the Machine, iyada oo wadooyinka kale ee sida Soo-guurka Song Led Zeppelin ; labada ciyaaryahan ee Johnny Cash iyo Bob Dylan gabadh ka timid waqooyiga dalka ; Howlin 'ee adiga Keydka Madow; iyo Kanye AWOODDA .
Maadama aad u maleyneyso inay tahay qalab suuq-geyn ah oo lagu ilaaliyo xilli-ciyaareedkii hore - waana taas. Laakiin bandhigayaashu waxay sidoo kale ballanqaadayaan in liiska cayaaruhu uu sharaxayo waxa aynu dhammaanteen rabno in aan ogaano, qaab wareegsan iyo hab qarsoodi ah.
"Jawaabta dhammaadka waa la qariyey boqol boqolkiiba doorashooyinka playlist," Benioff iyo Weiss ayaa u sheegay Spotify (19659005). ] Diiwaanka blog . "Qofna ma rumeyn doono, laakiin waa run."
"Si kastaba ha ahaatee, taageerayaasha ayaa u diraya liiska akhriska si ay u helaan qarsoodi ma ahan mid ujeedkoodu yahay abuurayaasha si ay u doonayaan inay wadaagaan. jacaylka dhagaxa, birta iyo noocyo kale oo muusiko ah, "ayaa sii waday sawirada Spotify. "Kadib dhammaantood, kooxda Mastodon waxay u muuqdeen inay yihiin Dhibaatooyin Zombie ah xilli ciyaareedka 7.
"Waxaan raadineynay heeso naga dhigtay inaan dareemo sida muuqaalka," ayuu u diyaargaroobayaashu u sheegay blog. "Waxaa jira noocyo kala duwan - Rage ma aha Johnny Cash. Laakiin labadoodaba waxay leeyihiin awood awood leh. Dhamaan, liiskan liiskan waxaa ku jira heeso 50, kuwaas oo aan ahayn liiska ugu horeeya helay in labadii nin ay tababaranayeen. 2017, bandhigayaashu waxay kaloo sameeyeen liiska playlistka Ciyaarta of Thrones: Songs of Ice iyo dabka iyadoo wada shaqeyn la leh Allison Hagendorf, hogaamiyaha Rockify ee Spotify, sida ay u sameeyeen liiskaan cusub.
waxaan sidoo kale helnaa Muuqaalka ciyaarta of Thrones Abriil 26. Farshaxanada sida The Lumineers, The Weeknd iyo A $ AP Rocky ayaa dhamaantood lagu soo bandhigay buuggan cusub ee heesaha lagu soo bandhigay bandhigga.
Source Source: HBO
Burburka finanku waxaa suurtagal ah inuu burburo qof filim ka soo shaqeeyey filimka - BGR
Ka fiiri xilliyada 7 ee 'Game of Thrones' ka hor Axad la socota clip of 2 daqiiqo - BGR